N’anga yony’udza tsotsi | Kwayedza
N’anga yony’udza tsotsi
09 Nov, 2018 - 00:11	 2018-11-08T10:10:28+00:00 2018-11-09T00:04:30+00:00 0 Views
Fortunate Gora ari kuCHINHOYI
MURUME wekuBanket, kuChinhoyi — wekupomerwa kuba mombe mbiri achibatsirana nemunin’ina wake — anonzi akazofumurwa humbavha uhu neimwe n’anga mushure mekunge aenda kwairi achida kubatsirwa kuti asasungwe nemapurisa nekuda kwemhosva yaakapara iyi.
Keith Masove (20) anogara paPlot 22 Tramore Farm, kuBanket, akamiswa mudare reChinhoyi Magistrate Court achipomerwa mhosva yokuba mombe dzaTsitsi Mashayamombe (63) anogara paPlot 24 Buxton Farm, ikoko kuBanket.
Nyaya iyi inonzi yakabuda pachena mushure mekunge Keith abatikidzwa naMashayambombe achipihwa mushonga neimwe n’anga wekuti asabatwe nemapurisa pamhosva yaari kupomerwa yekuba mombe.
Zvinonzi n’anga iyi — iyo isina kudomwa zita rayo mudare — ndiyo yakaronga nanyakubirwa mombe kuti auye azvionere ichishandira musungwa uyu.
Musi wa19 Gunyana, Keith akambobvuma mhosva iyi pamberi pemutongi Christine Nyandoro uyo akabva ati adzoke kudare musi wa24 Gunyana kuti apihwe mutongo wake.
Zvichakadaro, apo mutongi akange oda kupa mutongo wake, Keith akasimudza ruwoko achiramba mhosva iyi achiti paakaibvuma ainge azere nemweya wekutya.
“Musi uya raive zuva rangu rokutanga kupinda mudare, ndosaka ndakabvuma mhosva asi chokwadi ndechekuti handina kumbozviita, ndaive ndizere nekutya,’’ anodaro.
Mutongi Nyandoro akaona zvakakodzera kuti n’anga inonzi yakapa Keith mushonga iuye kudare kuzopawo huchapupu hwayo. Muchuchusi Trustmore Mukarati akaudza dare kuti mambakwedza emusi wa10 Gunyana, Keith nemunin’ina wake — Lewis Masove — uyo asati asungwa, vakaenda kudanga remombe raMashayamombe vakanoba mombe mbiri.
Keith anonzi akazoenda kune imwe n’anga achikumbira mushonga wokuti asabatwe nemapurisa pamhosva yaanonzi akapara iyi.
Zvinonzi kunyangwe n’anga iyi yakabvuma kumubatsira, haina kufarira zvaaive aita izvo zvakaita kuti inonyeurira Mashayamombe kuti akange abirwa mombe dzake nevaviri ava.
N’anga iyi naMashayamombe vanonzi vakazoronga kuti Keith auye kuzoshandirwa sechikumbiro chake asi yaida kuzofumura hutsotsi hwaaive aita nemun’ina wake.
Muchuchisi Mukarati anoti apo Keith akapinda mumba maive n’anga iyi, haana kuziva kuti Mashayamombe aive arimowo zvikaita kuti areurure humbavha hwake sezvo hwakange hwafumurwa.
Musungwa uyu anonzi akabva akumbira ruregerero kunaMashayamombe nekuda kwekumubira uko anonzi akaita mombe dzake.
Mashayamombe anonzi haana kukwanisa kumuregerera achibva anomhan’ara nyaya iyi paBanket Police Station zvikaita kuti Keith asungwe.